ICanLocalize: Si Qaali Ah U Tarjun Boggaaga Ganacsi Si Aad U Gaadho Dhagaystayaal Cusub | Martech Zone
ICanLocalize: Si Qaali Ah U Tarjun Boggaaga Ganacsi Si Aad U Gaadho Dhagaystayaal Cusub
Arbacada, December 23, 2020 Arbacada, December 23, 2020 Douglas Karr
Hay'addeydu waxay ka shaqeyneysaa caawinta shirkad laba luqadle ah oo la xiriirta daryeelka caafimaadka si ay u dhisto goobtooda, ugu fiicnaato raadinta, iyo horumarinta isgaarsiinta suuq geynta macaamiishooda. Intii ay lahaayeen degel wanaagsan oo WordPress ah, dadkii dhisay ayaa ku tiirsanaa turjumaadda mashiinka martida ku hadasha Isbaanishka. Waxaa jira saddex caqabadood oo ku saabsan tarjumaadda mashiinka goobta, in kastoo:
Soo koobid - Tarjumaadda mashiinka Isbaanishka tixgelin kama helin reer Mexico lahjad booqdayaasheeda.
Eray bixinta - Tarjumida mashiinka maheli karto mid caafimaad oo gaar ah ereyada.
Qawaaniinta - Tarjumaadaha, in kastoo ay fiicnaayeen, haddana ma ahayn kuwo ku sheekaysanaya dabeecadda… daruuri markii la hadlayay macmiilka bartilmaameedsanaya.
Si aan u qaabilno sedexda, waxaan ku qasbanaanay inaan ka gudubno turjumida mashiinka oo aan u kireysano adeega tarjumaada goobta.
Adeegyada Tarjumaadda WordPress WPML
Iyadoo Qalabka WPML ee luqadaha badan iyo mawduuc weyn oo WordPress ah (Salient) kaas oo taageera, waxaan awood u yeelanay inaan naqshadeynno oo aan daabacno goobta si fudud ka dibna ku darno Adeegyada Tarjumida WPML si aan si buuxda ugu turjunno goobta si macquul ah ICanLocalize's adeegyada tarjumida isku dhafan.
Adeegyada Tarjumaadda Isku-dhafan ee ICan
IcanLocalize waxay bixisaa adeeg isku dhafan oo dhakhso leh, xirfadle ah, oo la awoodi karo. Waxay bixiyaan in kabadan 2,000 oo shahaado haysta, turjubaano u dhashay oo ku shaqeeya in ka badan 45 luqadood Qiimayaashoodu aad ayey uga hooseeyaan hay'adaha dhaqameed ee kaliya aqbala ganacsiyada waaweyn ama u baahan nooc kasta oo dejinta koontada gacanta ah.
Adoo adeegsanaya Dashboard-ka WPML ee lagu dhajiyay ICanLocalize, waxaad dooran kartaa walxaha tarjumaadda oo waxaad ku dari kartaa dambiisha tarjumaadda. Ereyga tirinta iyo qiimaha si otomaatig ah ayaa loo xisaabiyaa oo loogu shubaa kaarkaaga deynta ee koontadaada ICanLocalize. Tarjumaadaha ayaa saf loo galay si otomaatig ah ayaa loogu daabacay bartaada dhexdeeda.
Marka laga reebo boggaga WordPress ee lagu dhisay WPML, ICanLocalize waxay sidoo kale tarjumi kartaa dukumiintiyada xafiiska, faylasha PDF, softiweer, barnaamijyada moobiilka, iyo qoraallada gaagaaban.
Saxeex u noqo ICanLocalize
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha ku xiran IcanLocalize.
Tags: tarjumaad la awoodi karomeel ka saartarjumaad isku dhafantarjumaadaadeegyada tarjumaaddawordpress luqado badanplugin WordPresstarjumaadda wordpressadeegga tarjumaadda wordpresswpml